မကြာမီထွက်ပေါ် မည့်Microsoft Windows 11 မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲ? Microsoft ကကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်း ..
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည်၆လပိုင်း၂၄ရက်နေ့က Windows ၏နောက်ထွက်မည့်အမည်ကိုတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့သည် " Windows 11 "။ Windows 11 အတွက်အဓိကအာရုံစိုက်စောင့်ကြည့်ရမှာကတော့ Windows user interface ဖြစ်ပါတယ် ဒီအသစ်ထွက်မယ် Windows 11 မှာတော့ User Interface ကိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ထားပီး၊ ဒါ့အပြင် Windows store အသစ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် multitasking တိုးတက်မှုများရှိမည်ဖြစ်သည်။ အထူးအခြားဆုံးအနေဖြင့် Windows 11 တွင် Android app များကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုနိုင်ရန်လည်းထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Windows 11 တွင်သတိထားရမည့်အချက်မှာ၎င်းသည် Start menu အသစ်နှင့် taskbar ပေါ်တွင်ဗဟိုပြုသည့် update လုပ်ထားသော button အသစ်ပါဝင်သည်။ ဤ UI သည် Windows 10X တွင်အရင်မြင်တွေ့ခဲ့သည့် design အလွန်ဆင်တူသည်။ တနည်းပြောရရင် Windows 10X ရဲ့ User Interface များသည့် အသစ်ထွက်မည့် Windows 11 မှာလဲမြင်တွေ့နေရအုံးမည်။
Start menu အသစ်သည် Windows 8 တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် Live Tiles ကိုပြန်လည်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီး Chrome OS သို့မဟုတ်Android တွင်ပုံမှန်မြင်တွေ့နေရသည့် launcher ကိုအသစ်ပြန်လည်အသုံးပြုထားသည်။ Appများ၊ စာရွက်စာတမ်းများအတွက်သီးခြားရှာဖွေရေးမျက်နှာပြင်များပါရှိလာမည်။ အဓိကအသွင်အပြင်အများစုကို macOS နှင့် Chrome OS တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုရယူထားသည်။Windows 11 တွင်လည်း Android နှင့် iOS နှစ်ခုလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသော rounded corners များပါဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။
Windows အကြီးအကဲ Panos Panay က "ဒီအဖွဲ့ဟာအသေးစိတ်တိုင်းကိုပြုပြင်ဖန်းတီးနေတယ်" လို့ပြောပါတယ်။ Windows 11 တွင် Dark mood နှင့် Light mood နှစ်ခုပါဝင်မည့်ဖြစ်ပြီး အရင် Windows version တွေထက်ဆန်းသစ်နေမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Microsoft သည် Snap Layouts ဟုခေါ်သောအရာတစ်ခုပါရှိလာမည်ဟုပြောသည်။ ၎င်းသည် Windows 11 ကိုထောက်ပံ့သောအမျိုးမျိုးသောအသုံးအဆောင်များသို့မဟုတ် App များကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်သည်။ Snap Groups ဟုခေါ်သည့်အရာကြောင့် Windows 11 ၏ဗားရှင်းအသစ်သည် App များကိုသိမ်းဆည်းထားသောနေရာကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်မည်။
၎င်းသည်မော်နီတာများစွာကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် App များကိုအမြဲတမ်းဖွင့်နေစေရန်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ Laptop နှင့် မော်နီတာချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည့်အခါတွင်လဲလွန်စွာအသုံးဝင်သည်။Windows 11 အတွက်ကြီးမားသောအာရုံစိုက်မှုတစ်ခုမှာ Performance ဖြစ်သည်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Microsoft Teams ကိုသုံးစွဲသူများအတွက် Windows 11 တွင်ထဲပေးထားသည်။ Microsoft Teams သည် Windows 11 အသုံးပြုသူများအားသူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဖြစ်မေးခွန်းမေးနိုင်ရန် taskbar တွင်တိုက်ရိုက်ပေါင်းစည်းထားသည်။၎င်းသည် Windows 10 ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော Skype မှဖန်းတီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် system tray တွင်အသံတိတ်ခလုတ်တစ်ခုပါဝင်ပြီးမိုက်ကရိုဖုန်းကိုအက်ပ်များအားလုံးတွင်အလွယ်တကူအသံတိတ်နိုင်သည်။
Windows Widgets နှင့် touch gestures များသည် Windows 11 တွင်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်လာသည်။ Widgets တွင်ကိုယ်ပိုင် Feed တစ်ခုဖန်းတီးနိုင်သည်။၎င်းသည် Windows 10 widgets များကိုအသစ်ပြန်လည်ဖန်းတီးထားခြင်းဖြစ်ပြီးဘယ်ဘက်မှ slide ပုံစံဖြင့်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ မော်နီတာမျက်နှာပြင်အပြည့်အဖြစ်လဲပြုလုပ်နိုင်သည်။ Widgets တွင်သတင်းများ၊ ရာသီဥတုနှင့်
Microsoft သည် window version ကိုတက်ဘလက်များအပေါ်တွင်လဲအသုံးပြုနိုင်ရန်ပြုလုပ်နေသည်။
တက်ဘလက်စနစ်သို့ပြောင်းသွားမည့်အစား Windows 11 သည်သုံးစွဲသူများအား OS ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိတွေ့အသုံးပြုနိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။
၎င်းနှင့်အတူ inking နှင့် voice typing များတိုးတက်မှုရှိလာသည်။ ဒါ့အပြင်အထူးဘောပင်များဖြင့် Windows 11 သည်haptic feedback များကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုတာက Windows 11 မှာဒီပြောင်းလဲမှုကိုထောက်ပံ့မယ့် hardware အသစ်တွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်ပါမယ်။
Xbox သည် Microsoft ၏ဖန်းတီးထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Xbox ၏အမှုဆောင် Sarah Bond ကနေ Windows 11 နှင့် PC Gaming အကြောင်းကိုလည်းကြားရသည်။ Xbox Series X / S တွင်ပါ ၀င်သည့် Auto HDR သည် Windows ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်လာလိမ့်မည်။ HDR မော်နီတာတစ်လုံးရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး DirectX 11 နှင့် DirectX 12 တို့လိုဂိမ်းအမြောက်အများကိုမြင့်မားသော dynamic range (HDR) သို့ပြောင်းနိုင်သည်။
Microsoft သည် Windows 11 အတွက်အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများကိုလည်းကတိပေးသည်။ DirectStorage သည် Windows 11 ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ Xbox Series X / S. ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်သည် Windows 11 တွင်ဂိမ်းဝန်ချိန်ကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ် NVM drives များလိုအပ်လာပေးမည်။ ဂိမ်းတီထွင်သူများသည်ဝန်ကိုထပ်မံမြှင့်တင်ရန်ဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားသည်။
Xbox Game Pass သည် Windows 11 သို့ပေါင်းစည်းဖန်းတီးထားခြင်းဖြစ်ပြီးလပေါင်းများစွာစမ်းသပ်နေသည့် Xbox appအသစ်များလဲထွက်ပေါ် လာနိုင်သည်။ Games stream များအတွက်လဲ Microsoft`s cloud များပါဝင်မည်။
The new Windows 11 app store with Andriod app.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Windows 11 ၏အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမှာ New store နှင့် Windows ရှိ Android အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ Microsoft store သည်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး Windows app စတိုးတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်မရရှိနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုထောက်ပံ့ထားသည်။ ၎င်းမှာ Adobe Creative Suite မှအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် TikTok နှင့် Instagram
အပါအဝင် Android အက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သည်။
Developer များအနေဖြင့် App များကိုလဲကိုယ်ပိုင်“ ရောင်းဝယ်ရေးအင်ဂျင် ” ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုလဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Satya Nadella က“ Windows ဟာ Developer များ၏လွတ်လပ်မှုကိုအမြဲတန်ဖိုးထားသည် " ဟုပြော
ဒီနေရာမှာအကြီးမားဆုံးသတင်းက Windows 11 မှာ Android App တွေသုံးမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ၎င်းကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန် Microsoft နှင့် Amazon နှင့် Intel တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး Windows 11 သည် Intel Bridge နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည် TikTok နှင့်အခြား Android အက်ပလီကေးရှင်းများကို Windows 11ရှိ Windows app များနှင့်အတူပြသခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီအနေဖြင့်“ လာမည့်လများအတွင်း” ဒီအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်စီစဉ်ထားသည်။
Windows 11 အတွက်ဖြန့်ချိမည့်ရက်မကြေညာသေးသော်လည်း Windows operating system အသုံးပြုသော hardware အသစ်များနှင့်အတူအောက်တိုဘာလတွင်Windows 11 ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။